Sida loo xaqiijiyo Koo app | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Sida looga xaqiijiyo Koo app
Sida looga xaqiijiyo Koo app
Ka xaqiiji abka Koo - Koo App asal ahaan waa Twitter leh qaab kale oo gaar u ah wadamada Aasiya. Waxaa la horumariyay intii lagu jiray arrimaha ganacsiga ee Shiinaha. Waxay hadda ku faantaa saldhigga isticmaale ee 5 Million+ isticmaalayaasha Android. Koo App waxa uu helayaa caannimo badan taas oo ay ugu wacan tahay saamaynta ay ka heleen kanaalada wararka caadiga ah iyo dadka caanka ah. Haddii aad ka mid tahay 5 milyan oo isticmaalayaasha Koo oo aad rabto in lagu xaqiijiyo Koo app, waxaanu halkan u joognaa inaanu ku caawinno.
Maqaalkan, waxaan ku sharxi doonaa, Sida loo xaqiijiyo abka Koo. Marka, ku dheggan casharka oo waxaad ka heli doontaa app Koo.
Shuruudaha lagu xaqiijiyo Koo App
Koo App waxa ay leedahay shuruudo loo baahan yahay in la buuxiyo si loo xaqiijiyo. Waxay u baahan doonaan ugu yaraan 10 maalmood si ay uga jawaabaan codsigaaga xaqiijinta. Waxaad ka akhriyi kartaa dhammaan shuruudaha ay dejiyeen kooxda Koo bogga caanka ah. Haddii aad u malaynayso, aad buuxisay shuruudaha xaqiijinta, ka dib codso si aad uga xaqiijiso app Koo.
Sidee looga xaqiijiyaa app Koo?
Si aad uga xaqiijiso app Koo, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tillaabooyinkan:
Soo gal akoonkaaga abka Koo si aad u bilowdo hawsha xaqiijinta
U gudub Profile oo fur goobaha Profile Koo
Dooro "Codso Koontada La Xaqiijiyay" ee ku dhex jirta goobaha Profile ee Koo
Akhri tilmaamaha iyo shuruudaha lagu siiyey foomka codsiga.
Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha, buuxi Foomka Google-ka si aad uga xaqiijiso abka Koo
Fiiro gaar ah: Habka xaqiijinta Koo waa dugsi hore oo qurux badan. Waxay u isticmaalayaan Google Form codsiga xaqiijinta ee Koo, kaas oo aan qaan-gaarin. Foomka Google-ku maaha doorasho badbaado leh oo lagu ururiyo xogta xasaasiga ah. Ma bixiso nooc kasta oo sir ah oo si fudud ayaa loo soo saari karaa. Waxaan rajeynayaa in Koo ay ku beddesho habka Google Form ee xaqiijinta codsiyada oo ay naqshadeeyaan wax iyaga u gaar ah.
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay casharkan si aad uga xaqiijiso app Koo mid waxtar leh. Hadii aad sameyso fadlan ku wadaag baraha bulshada Waxaad sidoo kale waydiin kartaa su'aalahaaga waxaanan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno jawaab sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Naga raac Twitter-ka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo wararka ku saabsan Android iyo Google. Waad ku mahadsan tahay akhrinta maqaalka.
Sida loo tirtiro Koo Account
ColorOS 12 (OPPO Android 12) Cusbooneysii Taariikhda Siideynta Tracker iyo Liiska Qalabka
Tags meel kasta, OnePlus wuxuu bilaabay OnePlusTag ka dib Apple iyo Samsung
Samsung Galaxy MWC: Qalabka naqshadaynta ee Watchfaces ee Samsung oo u imanaya horumariyeyaasha Android
5 Caddeynta Bulsho ee ugu Fiican WordPress Plugins
ColorOS 12 waxay la imaan doontaa qaybaha HydrogenOS